Ihe NJRA-21 (22503-72-6) hplc ma98% | AASraw Nootropics ntụ ntụ
IDRA-21 ntụ ntụ
/ ngwaahịa / Nootropics ntụ ntụ / Ntụ ntụ IDRA-21 (22503-72-6)
SKU: 22503-72-6. Category: Nootropics ntụ ntụ
AASraw nwere ikikere na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke ugbo IDRA-21 (22503-72-6), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Nzuzo IDRA-21 na-emepụta ihe bụ isi
aha: IDRA-21 ntụ ntụ
Molekụla Formula: C8H9ClN2O2S
Ọbara arọ: 232.69
Uhie IDRA-21 na-eme ka ụbụrụ na-arụ ọrụ ụbụrụ na mmụba ọzọ
Raw IDRA-21 ntụ ntụ
Ugbu a, a na-anwale ọnwụnwa n'anụ anụmanụ, na karịsịa oke na oke, nke abụọ gosipụtara mmelite nke a na-ahụ anya na enweghị mmetụta ọ bụla na-adịghị mma. Ụdị njedebe maka enwe bụ na 3 ma ọ bụ 5.6 mg / kg, nke e nyere na ihe ọmụma na IDRA-21 uzuzu bụ 10X dị ike karịa ndị ọzọ nootropics.
Ọ bụ ezie na ọ dịghị akwụkwọ ọmụmụ gbasara akwụkwọ a na-elekwasị anya na usoro ọgwụgwọ maka oriri ụmụ mmadụ, enwere ọtụtụ ntanetịime nyocha nke ndị ọgbọ nke na-atụ aro ahụmahụ dị mma mgbe a na-eji okwu ọnụ kwuo IDRA-21 raw powder. Ihe a tụrụ aro iji kwalite cognitivefunction bụ na 5-25mg.
A ghaghị iji nlezianya tụlee ntuziaka ndị a, karịsịa dị ka mmetụta nke ntụ ntụ IDRA-21 nwere ike ịdịru ruo 48 awa. Ọ bụrụ na ewere 5 mg, na-enweghị mmetụta ọ bụla na-emetụ ahụ mgbe ahụ, ọ bụrụ na ị gbakwunyere ihe ndị ọzọ a kwesịrị iji nlezianya mee ka e nwee ike iwepụ oge nke nwere ike ịkpata nsogbu.
Ịdọ aka ná ntị na Nzuzi IDRA-21
N'iji ya tụnyere ihe ndị ọzọ na-eme ka ọ ghara ikpuchi ya, IDRA-21 ntụpụ adịghị enwe mmetụta ọ bụla. N'ụzọ bụ isi, ọ na-eme ihe ọ na-ezubere ime, site n'ịkwado wakefulness, na ịbawanye ikike ịmụ ihe ma ghara ime ọtụtụ ihe ọzọ. Nke a na-akwado nkwado nke akụkọ ndị dabeere na nchọpụta nchọpụta nke ndị okenye na-eto eto rhesus ma tụọ ikike mmụta.
Ekwesiri ighota na omuma nke IDRA-21 raw powder adigide ruo 48 awa. Nsonaazụ ọchụchọ egosiwokwa na ntụpọ IDRA-21 bụ 10X dị ike nke na Aniracetam, nke bụ ọgwụ ọgwụ edere na Europe nke nwere ụdị nke INDA-21. Ọzọkwa, mmetụta nke ntụ ntụ IDRA-21 nwere ike ịdịru ruo ụbọchị 3 jiri tụnyere windo 2-3 hour nke Aniracetam.
Ndị na-eji IDRA-21 raw ntụ ntụ akọwapụta mmetụta nke nchekasị na isi ọwụwa Nke a na mmeghachi omume nwere ike ịbụ n'ihi na iji ụdị IDRA-21 mee ihe site na ndị mmadụ nwere ugwo elu karịa ma ọ bụ mụbaa arụ ọrụ na-adịghị eme ọ dị mkpa ka ị jiri ụdị ntụpọ IDRA-21.
Ọ dị mma na ndị mmadụ nwere ọrịa strok na nso nso a; nwere akụkọ ihe mere eme nke ọrịa strok ma ọ bụ ndị nwere ọrịa strok ekwesịghị iji IDRA-21 raw ntụ ntụ. Ngwunye netwọk nke mebiri emebi ma ọ bụ na-emebi emebi nwere ike ịmebi ngwa ngwa site na iji ihe mgbakwunye ma ọ bụ ogige ọ bụla na-akpali ma ọ bụ kwalite ọrụ mmegharị neuro.
Ugbu a, enweghị ụkpụrụ nduzi ọ bụla gbasara iji ntụ ntụ IDRA-21 mee ihe mgbe ị na-eji ọgwụ ndị e nyere ọgwụ ma ọ bụ na-emetụta ya n'ọnọdụ ọnọdụ ahụ ike. Ma echebara echiche banyere iji nootropics mee ihe n'otu oge ahụ dị ka iji antidepressants dị ka nchikota nwere ike imepụta ọnọdụ dị njọ
Ngwurugwu IDRA-21 bụ onyinye ọhụrụ dị ọhụrụ. Ọ na - arụ ọrụ dịka ọgwụ ọgwụ na - akpali akpali ma na - achọpụta ugbu a banyere ihe ọ na - emetụta na nwelite ncheta, mmelite nke mmetụ, mkpali, na iweghasị mkparịta ụka uche. O yikarịrị ka e mepụtara ya na 1994 ma ọ bụ 1995 dị ka nyocha mbụ nke ụlọ ọgwụ na nyocha nke ndị ọgbọ na-egosi na akwụkwọ ndị dị na 1995.
(1) Ngwá ọrụ IDRA-21
IDRA bụ nke otu ogige a maara dị ka ampakines. Ampakines bụ allosteric modulators nke ndị na-anabata AMPA na ụbụrụ. Ndị na-anabata AMPA bụ ọrụ maka nnyefe ngwa ngwa synaptic ma na-etinye aka na synaptic plasticity na ogologo okwu potentialiation.
Dị ka ihe ngwọta, IDRA-21 raw ntụ ntụ na-arụ ọrụ site na ịhazi AMPA ndị natara ụbụrụ. Nkọwa IDRA-21 kpọmkwem na-ejikọta na saịtị allosteric nke onye na-enweta AMPA ma na-eme mgbanwe dị mma, nke a na-akpọkarị ọrụ allosteric.
Nchoputa mbụ nke IDRA-21 raw ntụ ntụ na-atụ aro na ọ nwere ike igbochi mpempe akwụkwọ nhazi AMPA ma nwekwuo azịza synaptic na nkwado nchekwa na mmụta.
(2) Olee otu o si arụ ọrụ?
IDRA-21 raw ntụ ntụ bụ ampakine compound na ampakines na-eme ka ndị natara na ụbụrụ gị na-akpọ ndị na-anabata AMPA. Ndị a na-anabata ya na-ebuwanye ibu nke nkwurịta okwu n'etiti ụbụrụ ụbụrụ, nakwa dị ka mmụba mmụta na ebe nchekwa.
Ngwunye IDRA-21 na-ejikọta ndị natara na ụbụrụ nke na-achịkwa anya, nyocha, na ịzaghachi. Ọ na-ekwukwa mmetụta nke ụfọdụ ndị na-ahụ maka ụbụrụ, karịsịa glutamate. Glutamate bụ otu n'ime 2 kacha mkpa neurotransmitters dị na ụbụrụ na ọ bụ ọrụ maka ịtụgharị uche ngwa ngwa, mgbatị dịwanye elu, oge ka mma, na nkà na-adaba adaba.
(3) IDRA-21 ntụ ntụ Uru
• Mụbaa na cognition (Mmekọ ihe atụ ndị Rhesus chọrọ)
• Ịbawanye Ezigbo Ihe Ọrụ
• Na-abawanye na Nchekwa Oge Dị mkpirikpi
• Ngwọta Ọgwụgwọ Pụrụ Iche Na Schizophrenia
• Mmetụta Ọgwụgwọ Na Ahụike Na Mmetụta
• Uru megide Alprazolam-agbaghara Cognitive Deficit
IDRA-21 ka ntụ ntụ
Raw IDRA-21 ntụ ntụ ahịa
Otu esi azụta IDRA-21 ntụ ntụ si AASraw
IDRA-21 Ntụziaka ntụ ntụ ntụ ntụ:
Ngwurugwu ọgwụ IDRA-21 bara uru bara uru